Kooxda Manchester United oo aan Paul Pogba u ogolaan doonin inuu tago – Gool FM
(Manchester) 27 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay hoos u dhigi doonto in ciyaaryahankeeda khadka dhexe ee Paul Pogba inuu ka tago suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Pogba ayaa bandhig fiican ka sameynaya kooxda Man United tan iyo markii Ole Gunnar Solskjaer uu xilka tababarennimo ee kooxda ka bedelay Jose Mourinho bishii December ee la soo dhaafay.
25-sano jirkaan Pogba ayaana dhaliyey siddeed gool 12-kii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ciyaaray horyaalka Ingriiska ee Premier League.
Xiddigan khadka dhexe ee xulka qaranka Faransiiska ayaa dhowaan sheegay in Real Madrid ay tahay koox riyo, waxaana tan iyo markaas la warinayey in laacibka ku guuleystay Koobka Adduunka uu go’aansaday inuu xagaagan isaga tago kooxda Man United.
Yeelkeede, Jariiradda London Evening Standard ayaa warinaysa Red Devils ay diidi doonto dhaqaaq kasta oo dhinaca Pogba ah, kaasoo sidoo kale la la xiriirinayay kooxaha Barcelona iyo Juventus 12-kii bilood ee ugu dambeeyey.
Pogba ayaa heshiiskiisa kooxda 20-ka goor ku guuleystay horyaalka Ingiriiska uu ku eg yahay illaa xilli ciyaareedka 2020-21, waxaana uu sidoo kale haystaa dooq kale oo uu heshiiskiisa ugu darsan karo hal sano oo kale taasoo ka dhigaysa inuu qandaraaskiisa kooxda Man Utd sii tixnaado illaa bisha June sanadka 2022-ka.
RASMI: Joe Gomez oo dib ugu soo laabtay tababarka kooxdiisa Liverpool